'स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग उठाउँदा दण्डित हुनुपर्ने ?'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २३, २०७७ जयसिंह महरा
भिडियो कुराकानी :
सरकारले गरेका कामकारबाही नेपालको संविधान, पार्टी विधान, घोषित निती अनुरुप मिलेन भने 'यहाँनेर मिलेन है, मिलाउनुपर्‍यो' भन्दा त्यो सरकारलाई सहयोग हो । देशको हित, जनताको आकांक्षा, भावना र मागबमोजिम कुनै कुरा भएन र जनता त्यसबाट असन्तुष्ट भएर भड्किन सक्ने अवस्था भएकाले 'यहाँनेर यस्तो भयो, नगरौं' भन्दा त्यो पनि सरकारलाई सहयोग हो ।
नक्सा सार्वजनिक र चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौताको मुक्तकण्ठले प्रसंसा गरेका छौं । भारतसँग डुबानको बारेमा वार्ता राम्रो भयो । निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले भारतमा भ्रमण गर्नुभयो, राम्रै भयो । तर, अब समस्या कत्ति पनि छैन नभनौं भनेर त्यतिबेला नै भनिरहेको थिएँ । मलाई 'पूर्ण सफल भयो, समस्या कत्ति पनि छैन भन्नुपर्नेमा म हेर्छु समस्या समाधान भएको छैन भन्ने ?' भनियो । भारतसँगको समस्या पूरै समाधान भएको भए अहिले वार्ता पनि नगर्ने अवस्था किन आयो त ? त्यसैले कुनै काम विवेक र सुझबुझपूर्ण अवस्थाले गरौं भन्दा सरकारलाई असहयोग भयो भनेर बुझियो भने कसैको सुझाव नसुन्ने बिन्दुमा पुगिन्छ ।
हाम्रो देशको कानुनभन्दा अर्को देशको कानुन माथि हुने, हाम्रो अधिकार कुण्ठित हुने सम्झौतामा लेख्ने ? हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधन र जमिनसमेत अर्काको कब्जामा जाने कुरा खुलेआम कति धक नमानी लेख्ने ? जम्माजम्मी ५५ अर्ब दिने भनेको छ । एक वर्षमा मुस्किलले ११ अर्ब रुपैयाँ आउँछ । त्यो रकममा हाम्रो देशको स्वाधिनतालाई नै बन्धकी राख्ने ? यो कुरा कदापी मान्य हुन सक्दैन । केन्द्रीय कमिटीले 'यो सम्झौता गर्दैनौं' भन्ने निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर कार्यदल बनायो । स्थायी कमिटीले गएको संसद अधिवेशनबाट यसलाई पारित नगर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।
अहिले जनताले कर तिरेको रकमबाट एमसीसीको गुणगान गाउनका लागि 'यो त राम्रो हो नि' भनेर संचारमाध्यममा हजारौं रकम खर्च गरेर विज्ञापन गरिँदैछ । यो लज्जास्पद हो । साथै सिंहदरबारमा हुनुपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए) को कार्यालय पाँचतारे होटलमा राखेको छ । एकातिर अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ हामीले मितव्ययिता अपनाएका छौं, कोरोनाको संक्रमणले आर्थिक चाप छ । तर एउटा नेपाल सरकारको कार्यालयलाई कसलाई खुसी पार्न हो पाँचतारे होटलमा राखिन्छ । यो मान्य हुन सक्दैन ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १७:३०
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १७:०१